LED strips တွေ
နံရံ / မျက်နှာကျက် / ကြမ်းခင်းဗိသုကာပညာလူမီနီယမ်ကိုယ်ရေးဖိုင်
မျက်နှာပြင် Aluminium ကိုယ်ရေးဖိုင်
LED Strip Lighting သည်အကျိုးကျေးဇူးများစွာကိုပေးသည်
လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်အတွင်း LED နည်းပညာသည်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောနှုန်းဖြင့်တိုးတက်ခဲ့သည်။ ယနေ့ခေတ် LED မီးလုံးများသည်ယခင်ကထက်ပိုမိုထိရောက်။ သဘာဝကျစွာကြည့်ရှု့လာကြသည်။ LED မီးအလင်းရောင်သည်အိမ်၌ဖြစ်စေ၊ အိမ်ပြင်၌ဖြစ်စေသင်လိုအပ်သည့်မည်သည့်နေရာတွင်မဆိုအပိုအလင်းရောင်ပေးနိုင်ရန်စိတ်ချရသော၊ ကုန်ကျစရိတ်သက်သာသောနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ ယနေ့ထူးခြား။ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်လိုက်ဖက်သော ။
LED မီးလုံးများသည်သာမန်မီးလုံးများထက်နှစ်ပေါင်းများစွာကြာရှည်ခံရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ ၎င်းတို့သည်အစားထိုးရန်ခဲယဉ်းသည်။ လှေကားများအောက်၊ ဘေးပတ်လည်၊ ဗီဒိုများ၊ သို့မဟုတ်သံပန်းများပတ် ၀ န်းကျင်သို့သွားရလာရခက်ခဲသောနေရာများတွင်အသုံးပြုခြင်းသည်ခဲယဉ်းပြီးအချိန်ကုန်သောမီးသီး မှုကိုရရှိစေသည်။
LED များသည်နှိုင်းယှဉ်နိုင်သော incandescent, fluorescent, သို့မဟုတ် halogen မီးများထက်သိသိသာသာပိုစျေးကြီးသော်လည်း၊ ကန ဦး စတင်ကုန်ကျစရိတ်ကိုမီးသီး၏ကြာရှည်ခံမှုနှင့်စွမ်းအင်အသုံးပြုမှုနိမ့်သည်။ LED strip lighting သည်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားအလွန်နည်းသောကြောင့်သင်၏ရှိပြီးသားမီးများကိုအစားထိုးခြင်းသည်သင်၏လစဉ်ဓာတ်အားခကိုချက်ချင်းလျှော့ချပေးနိုင်သည်။ ထို့အပြင်အစားထိုးလဲလှယ်မှုမရှိခြင်းသည်ယေဘူယျအားဖြင့်ကုန်ကျစရိတ်ကိုလျှော့ချပေးပြီး LEDs များ၏စုစုပေါင်းတန်ဖိုးကိုမြင့်မားစေသည်။ မကြာခဏပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုနည်းပါးခြင်း၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားလိုအပ်မှုနည်းပါးခြင်းနှင့်ကြာရှည်စွာအလုပ်လုပ်နိုင်ခြင်းတို့သည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်မြင်ဖူးသမျှကုန်ကျစရိတ်အသက်သာဆုံးအလင်းရောင်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်စေပါသည်။
ယနေ့ယဉ်ကျေးမှုတွင်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာစိုးရိမ်ပူပန်မှုသည်လူများစွာအတွက်ယခင်ကထက်ပိုအရေးကြီးလာသည်။ လူများစွာသည်၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်စားသုံးသူအမှိုက်များ၊ လျှပ်စစ်သုံးစွဲမှုနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အမှိုက်ပုံများ၊ မြစ်များနှင့်ရေကန်များထဲသို့အန္တရာယ်ရှိသောဓာတ်များကိုထည့်သွင်းသတိရှိကြသည်။ LED strip lighting သည်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်လိုက်ဖက်ညီသည်။ အလင်းရောင်၏လျှပ်စစ်လိုအပ်ချက်များသည်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားကုန်ကျစရိတ်ကိုသက်သာစေပြီးအိမ်တစ်အိမ်လုံး၏ပါဝါအသုံးပြုမှုကိုလျှော့ချပေးသည်။ သူတို့၏ရှည်လျားသောအသက်တာသည်အလွန်ရှားပါးသောအစားထိုးလဲလှယ်ခြင်းကိုခွင့်ပြုသည်၊ ပိုများသောအရာများကိုအမှိုက်ပုံထဲတွင်မထားရ။ LED မီးများမအောင်မြင်ပါကမသင့်လျော်ဘဲစွန့်ပစ်ရန်အန္တရာယ်ရှိနိုင်သောကျစ်လစ်ချောင်းမီးသီးများနှင့်မတူဘဲသန့်ရှင်းရေးသည်ဘေးကင်းလုံခြုံပြီးအထူးကိုင်တွယ်ရန်မလိုအပ်ပါ။
LED မီးအလင်းရောင်ကိုအိမ်တွင်း၌ဖြစ်စေ၊ အိမ်ပြင်၌ဖြစ်စေသုံးနိုင်သည်။ ၎င်းကိုတောင့်တင်းသော (သို့) ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်သောအပိုင်းများတွင်ရရှိနိုင်ပြီး၎င်းကိုမည်သည့်နေရာတွင်မဆိုအလွယ်တကူထားရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ ၎င်းသည်တပ်ဆင်ရလွယ်ကူပြီးအချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအနည်းငယ်သာလိုအပ်သည်။ ၎င်းကိုသင်၏အလင်းရောင်လိုအပ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီရန်သင်စိတ်ကူးနိုင်သည်၊ မည်သည့်အရွယ်အစား၊ အရှည် (သို့) ပုံစံမျိုးတွင်မဆိုရရှိနိုင်သည်။ ၎င်း၏ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ကို၎င်း၏ကြာရှည်ခံနိုင်သောယုံကြည်စိတ်ချရမှုနှင့်အချိန်ကြာမှုကြောင့်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာခြင်းတို့က၎င်းတို့အားအလင်းရောင်အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း (သို့) ပိုမိုစိမ်းလန်းသောလူနေမှုဘ ၀ သို့ ဦး တည်ရန်ကြိုးစားခြင်းအတွက်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်စေသည်။
Office ကို: Doguskent Cadessi Tas Apt.10 /6Maltepe / အစ္စတန်ဘူလ် / တူရကီ
တူရကီစက်ရုံ: Sorkun Koyu, Yeni Mevkii No.73, Dörtdivan / Bolu / တူရကီ
ဖုန်းနံပါတ် + 90-543-8828188 （WhatsApp）
E-mail ကို: inqu@ristargroup.com
လူကြိုက်များရခြင်း အကြောင်းအရင်းက ဘာလဲ...
ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး စီးပွားရေး အရှိန်အဟုန်ဖြင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာသည်နှင့်အမျှ စျေးဝယ်ပတ်ဝန်းကျင်အတွက် လူများ၏ လိုအပ်ချက်များသည် ပိုမိုမြင့်မားလာကာ စတိုးဆိုင်အလှဆင်ခြင်းနှင့် ကုန်သည်များ၏ ဒီဇိုင်းများသည် အရောင်းအ၀ယ်ဖြစ်လာစေပါသည်။
နည်းလမ်း၊ နည်းစနစ် နဲ့ လက်တွေ့ အသုံးချနည်း...
အတုအယောင် အလင်းရင်းမြစ်အသစ်များ၊ ပစ္စည်းအသစ်များနှင့် မီးလုံးများနှင့် မီးအိမ်အသစ်များ၏ စဉ်ဆက်မပြတ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာမှုကြောင့် အတုအယောင် အလင်းရင်းမြစ်များကို အသုံးပြု၍ အနုပညာလက်ရာမြောက်သည့် နည်းပညာများ တနေ့တခြား တိုးပွားလာလျက်ရှိပြီး ကျွန်ုပ်တို့အား ပံ့ပိုးပေးနေသည့်...
LED panel မီးများကို မည်သို့ခွဲခြားနိုင်မည်နည်း။
အခြားအလင်းရောင်များနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက၊ LED panel light သည် အလွန်ပါးလွှာသော၊ အလွန်တောက်ပသော၊ အလွန်စွမ်းအင်ခြွေတာမှု၊ အလွန်ကြာရှည်သော၊ အလွန်ခြွေတာပြီး စိတ်ပူစရာမရှိပါ။ ဒီတော့ LED panel မီးတွေကို ဘယ်လိုခွဲခြားရမလဲ။ 1. ကြည့်လိုက်ပါ...
LED Linear Light အကြံပြုချက်များ
LED linear light ကို linear wall washer light လို့လည်း ခေါ်ပါတယ်။ ဆားကစ်ဘုတ်များ စုစည်းရန်အတွက် PCB hard boards ကိုအသုံးပြုသည်။ မီးခွက်ပုတီးများသည် SMD သို့မဟုတ် COB ဖြင့်ဖြစ်နိုင်သည်။ မတူညီတဲ့ အစိတ်အပိုင်းတွေကို နေရာဒေသအလိုက် ရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်...
စျေးကွက်ချဲ့ထွင်ခြင်းနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာ ဆန်းစစ်ခြင်း...
ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ စွမ်းအင် ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ကာကွယ်ရေး သဘောတရားများကို အကောင်အထည်ဖော်ရန်နှင့် နိုင်ငံအသီးသီးရှိ စက်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ မူဝါဒများ၏ ပံ့ပိုးကူညီမှုဖြင့် ကမ္ဘာ့ LED မီးထွန်းဈေးကွက်ကို ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားကြောင်း စာရင်းအင်းများအရ သိရသည်။
ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်တဲ့ အလင်းရောင်နဲ့ စိမ်းလန်းတဲ့ အလင်းရောင်အကြောင်း ပြောနေတာ...
အစိမ်းရောင်မီး၏ အဓိပ္ပါယ်မှာ မြင့်မားသော ထိရောက်မှုနှင့် စွမ်းအင်ချွေတာမှု၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ကာကွယ်ရေး၊ ဘေးကင်းရေးနှင့် သက်တောင့်သက်သာရှိမှု ညွှန်းကိန်းလေးခု ပါဝင်ပါသည်။ စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားပြီး စွမ်းအင်ချွေတာခြင်းဆိုသည်မှာ...
LED ကြိုးများ တပ်ဆင်ခြင်းအတွက် သတိထားရမည့်အချက်များ...
6. တပ်ဆင်သည့်အခါ မျက်နှာပြင်ကို သပ်ရပ်သန့်ရှင်းအောင် ဂရုပြုပါ အလင်းတန်းများကို မတပ်ဆင်မီ၊ တပ်ဆင်မျက်နှာပြင်ကို ဖုန်မှုန့် သို့မဟုတ် ဖုန်မှုန့်များ ကင်းစင်အောင် ထားပေးပါ၊ မီးချောင်း၏ကပ်ငြိမှုကို မထိခိုက်စေရန်...
1. တိုက်ရိုက်အလုပ်လုပ်ခြင်းအား တားမြစ်ခြင်း LED အမြှောင်းအလင်းသည် အထူးလုပ်ဆောင်မှုနည်းပညာဖြင့် ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် ဆားကစ်ဘုတ်ပေါ်တွင် ဂဟေဆော်ထားသော LED မီးလုံးပုတီးစေ့ဖြစ်သည်။ ထုတ်ကုန်ကို တပ်ဆင်ပြီးနောက်၊ အားဖြည့်ပေးပြီး မီးလင်းသွားမည်ဖြစ်ပြီး၊
စွမ်းအင်ချွေတာခြင်းဆိုင်ရာ နည်းစနစ်များနှင့် နည်းလမ်းများ...
"မီးအိမ်" သည် အလင်းရောင်ပေးစွမ်းရုံသာမက အလှဆင်ခြင်းနှင့် အလှဆင်ခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ဆောင်ချက်လည်း ပါရှိသည်။ သို့သော် ပါဝါမလုံလောက်ပါက မီးအလင်းရောင်၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကို မြှင့်တင်ပေးသင့်ပြီး အလင်းအား...
မျက်နှာကျက်မီး တစ်လုံးလောက်နဲ့ မလုံလောက်ဘူး...
လူတစ်ယောက်ရဲ့ဘဝရဲ့ သုံးပုံတစ်ပုံဟာ အိပ်စက်ပြီး အိပ်ခန်းထဲမှာ ဒီထက်ပိုကြာကြာနေရမယ်။ ဒီလိုအရေးကြီးတဲ့ နေရာတစ်ခုအတွက် တတ်နိုင်သမျှ နွေးထွေးစွာ အလှဆင်ဖို့ လိုအပ်ပြီး အပန်းဖြေဖို့ အကောင်းဆုံးနေရာဖြစ်အောင် ဖန်တီးထားဖို့ လိုပါတယ်...
အလင်းရင်းမြစ်၏ အရောင်အပူချိန် လူများသည် အလင်းရင်းမြစ်၏ အရောင်ဇယားကို ဖော်ပြရန်အတွက် အလင်းရင်းမြစ်၏ အရောင်အပူချိန်နှင့် တူညီသော သို့မဟုတ် နီးစပ်သော ပြီးပြည့်စုံသော ရေတိုင်ကီ၏ ပကတိအပူချိန်ကို အသုံးပြုသည် (...
LED လမ်းမီးများ မဝယ်ပါနှင့်...
LED Street Light ကို နေ့စဉ်နှင့်အမျှ အချိန်အကြာကြီး ဖွင့်ထားရန် လိုအပ်ပါသည်။ အရည်အသွေး သတ်မှတ်ချက်တွေ မမြင့်ဘူးဆိုရင် လူတွေက မကျေနပ်ရုံသာမက လမ်းမီး စီမံခန့်ခွဲရေးနဲ့ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုကလည်း ခက်ခဲတဲ့ အလုပ်တစ်ခုပါ။
Tri-Proof Light Lighttip , Led Floodlight 30w , Ceiling Led Panel Light , 900w Led ရေလွှမ်းမိုးအလင်း, Led နေရောင်ခြည် Rechargeable ရေလွှမ်းမိုးအလင်း, Philips က 3030 Led ရေလွှမ်းမိုးအလင်း,